Dowladda Sudan oo askar dharcad ah u adeegsata dibed baxayaasha - BBC News Somali
Dowladda Sudan oo askar dharcad ah u adeegsata dibed baxayaasha
Image caption Askarta ka hortagta muharaadyada ee Sudan
BBC Africa Eye ayaa si dhaw u daristay in ka badan laba boqol oo muuqaal oo la soo galiyay baraha ay bulshadu ku wada xiriirto ama ay si toos ah ugu soo direen dibed baxayaasha.
Xubno ka tirsan booliska, milateriga iyo askar dharcad ah ayaa muuqaallo laga duubay xilli ay garacaayeen dibed baxayaasha, isla markaana inta ay jiidaan ku kaxaysanayay gawaarida cadcad ee dusha ka furay ee lagu yaqaano laamaha ammaanka ee Sudan.
Kooxaha u dhaq-dhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee Sudan ayaa sheegaya in dhibbanayaashaasi la geeyo xabsiyo qarsoodi ah oo lagu magacaabo guryaha reer akharaadka, maadaama dadka lagu xiro aan la arag, kuwa lagu jirdilana cabaadkooda laga maqlo meel fog.
BBC Africa Eye ayaa ogaatay in ugu yaraan laba ka mid ah xabsiyadaasi ay ku yaallaan caasimadda Khartoum.
Afhayeen u hadlay dowladda ayaa beeniyay inay jiraan xabsiyadaasi qarsoodida ah, waxaana uu sheegay in booliska aanu sharciga u ogoleyn inay garaacaan ama jirdilaan dibed baxayayaasha.
Waxa uu intaa ku daray in dadka mudaharaadaya aanay ogolaansho haysan oo dibed baxyadu ay yihiin kuwo sharci darro ah.